पहिलो आर्यसत्य ः यथार्थ दुःख — Study Buddhism
जीवनको एक आधारभूत यथार्थ के हो भने सबैजना सुखी हुन चाहन्छन्, कोही पनि दुःखी हुन चाहँदैन। कसैलाई पनि समस्या र पीडा मन पर्दैन, यो आफ्नै अनुभवबाट हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौं। तर यसका बावजुद हाम्रो जीवनभर अनेक प्रकारका समस्या आइरहन्छन्। हामी तिनलाई पन्छाउन जति नै जोडबलले प्रयत्न किन नगरौं, ती आइ नै रहन्छन्। दैनिक जीवनमा कुनै समस्या आयो भने त्यसलाई समाधान गर्न हामी भरमग्दुर प्रयास गर्छौं। र, यसरी एक एक गरी समस्या उब्जिँदै जाने अनि तिनलाई समाधान गर्दै जाने काम अन्तहीन हुन्छ। बुद्धले जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले के जान्नुभयो भने जीवनका केही कुरा त्यस्ता रहेछन्, जो सबैका लागि सबै ठाउँमा उत्तिकै सत्य रहन्छन्। तिनैलाई आर्यसत्य भनिन्छ। बुद्धले अनुभूत गर्नुभएको र बताउनुभएको पहिलो आर्यसत्य के हो भने हामी आफ्ना लागि दुःख उत्पन्न हुने काम निरन्तर गरिरहन्छौं, र यो नै हाम्रो वास्तविक समस्या अथवा हामी सबैको यथार्थ दुःख हो। यदि हामीले आफ्ना लागि थप दुःख उत्पन्न गर्ने काम रोकेनौं भने ती कहिल्यै बन्द हुने छैनन्। त्यसैले यथार्थ दुःख के हो, त्यो जान्नु हाम्रो पहिलो कार्य हुनेछ।
खुसी र बेखुसीका उतारचढावहरू
उतारचढाव भइरहने शरीर र मनको चक्करलाई हामी चलाइरहन्छौं
सीमित क्षमतायुक्त शरीरको दुःखका चार पक्ष
हाम्रा समस्या र दुःखका प्रकार अनेक छन्। जीवन दुःखपूर्ण या तनावयुक्त हुन सक्छ। हामी सबै आफ्नो जीवन सुखपूर्ण बनाउन चाहन्छौं, तर प्रायः परिस्थिति हामीले सोचेजस्तो ढंगको बन्दैन। हामीलाई मन नपर्ने कुरा घटित हुन सक्छ, जस्तै – हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेला, मानिसले हामीसँग खराब व्यवहार गर्लान्, हामी बिरामी परौंला, जागिर खुस्केला, वा त्यस्तै अनेकथोक होला। यस्ता परिस्थितिबाट हामी जति नै बच्न खोजेपनि कुनै बेला ती आइलाग्छन्। प्रायः त्यस्तो बेला हामी ती परिस्थितिका कारण निराश बन्छौं वा तिनलाई त्यत्तिकै बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्छौं। तर त्यसले परिस्थितिलाई झन खराब बनाउँछ। अनि हामी थप दुःखी बन्छौं।
केही गरी कुनैबेला अलिकति खुसी भयौं भने त्योसँगै एक समस्या आइहाल्छ। त्यो के भने, त्यो खुसी धेरै समय टिक्दैन। त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन र हामीलाई थप खुसी चाहिन्छ। यो “थप” को खोजीमा हामी आफ्नो धेरै समय र उर्जा खर्च गर्छौं। सोसल मिडियामा सेल्फी पोस्ट गरिसकेपछिको आफ्नो व्यवहारलाई सम्झिहेरौँ। प्रत्येक पटक एक “लाइक” थपिँदा डोपामाइन हार्मोनको एक डोज निस्केर हामीलाई केही खुसी दिन्छ। तर त्यो कतिञ्जेल टिक्छ? थप लाइक बढ्यो कि बढेन भनेर हामी कतिपटक चेक गर्छौं? अनि खासै धेरै लाइक आएनन् भने हाम्रो हालत के हुन्छ? त्यो दुःख हो, होइन त?
हाम्रो जीवनमा सधैँ उतारचढाव आइरहन्छ — कहिले हामी खुसी हुन्छौं र रमाउँछौं, कहिले दुःखी र व्यथित हुन्छौं। अक्सर हामी “जीवन भनेको यस्तै हो” भनेर चित्त बुझाउँछौं, यसको गहिराइसम्म पुग्ने कोसिस गर्दैनौं। तर के हामीले चाहेको जीवन त्यस्तै नै हो त — अब आउने क्षणमा के हुन्छ थाहापत्तो नै नहुने? सौभाग्यवश बुद्धले यसलाई गहिराइसम्म पुगेर हेर्नुभयो र यो परिस्थिति पछाडिको खास कारण पत्ता लगाउनुभयो। यो सबैको कारण हाम्रो अहिलेको शरीर र मनको प्रकृति रहेछ। यो जुन शरीर र मन हाम्रो छ, त्यसले चुम्बकले तानेसरी जीवनका उतारचढावलाई तान्ने रहेछ, र यसैका आधारमा हाम्रा सबै भोगाइ हुने रहेछन्। अझ गहिरोगरी समस्याको कारण खोतल्ने हो भने, यस्तै खालको शरीर र मन भएका कारण हामी जीवनका यी यावत उतारचढावलाई निरन्तरता दिँदा रहेछौं, र यो क्रमलाई आज वा आउने हप्ता मात्र होइन, नमरुञ्जेल निरन्तरता दिँदा रहेछौं। तर यो क्रम एक जीवनमा मात्र सीमित नहुने रहेछ, पुनर्जन्मको सन्दर्भमा बुद्धले के बताउनुभएको छ भने यो क्रम आगामी जन्महरूमा पनि निरन्तर चल्ने रहेछ। पुनर्जन्मको कुरा अहिल्यै बुझ्न वा स्वीकार गर्न सक्दैनौं भने पनि यति त बुझ्न सक्छौं कि हामीले भविष्यका पुस्ताहरूका लागि यस्तै समस्याको निरन्तरता दिइरहेका छौं। उदाहरणका लागि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई लिउँ — हामीले गरेका कामका कारण हामी यो पृथ्वीबाट गैसक्दा पनि भविष्यका पुस्ताका लागि समस्या उत्पन्न भैरहनेछ।
त्यसो भए यो शरीर र मनको वास्तविक समस्या के हो त? समस्या के हो भने यिनीहरूको क्षमता सीमित छ। शरीरको सीमितता हो — यो विरामी पर्छ, बुढो हुँदै जान्छ, जर्जर बन्दै जान्छ। बोतलको दुधजस्तो यो पनि “एक्स्पायर” हुन्छ। तर सायद बोतलको दुधभन्दा पनि यसको हालत खराब छ, किनकि यसको एक्स्पायरी तिथि पनि निश्चित छैन। यो शरीरको एक्स्पायरी वा समाप्ति कहिले हुन्छ, केही थाहा छैन। जबसम्म यो शरीर छ, तबसम्म यसको हेरचाहका लागि हामी कति समय खर्च गर्छौं, सोच्नुस् त! यसलाई सफा गर्नुपर्यो, लुगा लगाइदिनुपर्यो, खुवाउनुपर्यो, यसलाई शौचालयसम्म लग्नुपर्यो, कसरत गराउनुपर्यो, आराम गर्न र सुत्न दिनुपर्यो, र कुनै बेला चोटपटक लाग्यो वा बिरामी भयो भने यसको स्याहार सुसार गर्नुपर्यो। यो सबै गर्न कति आनन्द छ हगि? एक महान् भारतीय बौद्ध आचार्यले यसलाई सुन्दर तरीकाले भन्नुभएको छ — हामी सबै आफ्नो शरीरका दास हौं।
हाम्रो आवेग र भावनाजस्तै यो मनको पनि क्षमता सीमित छ। यो मनलाई हामीले शिक्षा दिनुपर्यो, तालिम दिनुपर्यो, तैपनि कैयौं कुरा यसले जान्न सक्दैन। कुनै पनि कुराको पूर्ण चित्र यसले देख्न सक्दैन – उदाहरणका लागि, विश्वव्यापी तापमान बृद्धि, कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स), रोबोटिक्स, भर्चुअल रियालिटी आदिको असर के हुन्छ, त्यो हामी देख्न सक्दैनौं; आफ्नो जीवनमा के भैरहेको छ भन्ने कुरा जान्न त परै जाओस्। अझ खराब त के भने शरीरजस्तै यो मन पनि समयसँगै बुढो हुँदै जान्छ —स्मरणशक्तिमा ह्रास आउँछ, मस्तिष्कले ढीलो काम गर्न थाल्छ, हामी सजिलैसँग भ्रमित हुन थाल्छौं।
यी सबै थोकका अतिरिक्त हाम्रो भावनाहरूमा सजिलै चोट लाग्छ र आवेगहरू यसरी अनियन्त्रित दौडन्छन् कि हामी राम्रोसँग सोचविचार समेत गर्न सक्दैनौं। तर यो सबैका पछाडिको मुख्य समस्या के हो भने हाम्रा सीमित क्षमतायुक्त शरीर, मन, आवेग, भावनाहरू दोहोरिरहन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो पुनरोत्पादन गरिरहन्छन्।
बुद्धले हाम्रो सीमित क्षमतायुक्त शरीरको दुःखका चार पक्षका बारेमा बताउनुभएको छः
प्रथमतः यो अनित्य छ। कुनैबेला हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र हामीलाई रमाइलो लाग्छ। तर सानोभन्दा सानो कारणले यो शरीरको सन्तुलन बिग्रन सक्छ, हामी विरामी पर्छौं र नरमाइलो अनुभव हुन्छ। यो शरीर कति कमजोर छ भने सानोभन्दा सानो कुराले यसलाई चोट पुर्याउन र पीडा दिन सक्छ। प्रत्येक क्षणले हामीलाई मृत्युतर्फ नै धकेलिरहेको छ। हामी यो शरीर सदासर्वदा यसरी नै स्वस्थ र तगडा रहनेछ भन्ने कल्पना गर्छौं, बुढो भैसक्दा पनि युवावस्थाजस्तै खानेकुरा खान र सबैथोक गर्न सक्छौं भन्ने सोच्छौं। तर त्यसो सोचेर हामीले आफूलाई उल्लु बनाइरहेका हुन्छौं, सधैँ जवान रहने हाम्रो सधैँको संघर्षले हामीलाई थप चिन्ता र तनाव मात्र दिइरहेको हुन्छ।
दोस्रो, यो शरीर आफैंमा समस्यायुक्त छ। हामीलाई लाग्न सक्ला कि धेरै अत्तर छर्केर, श्रृङ्गारपटार गरेर, वा मांसपेशी बलिया बनाएर यो शरीरलाई आकर्षक देखाउन सक्यो भने खुसी भइएला। तर जतिसुकै आफूलाई सुन्दर देखाउन प्रयास गरेपनि अझ सुन्दर देखिन पुगेन कि वा आफ्नो सुन्दरता फेरी गुम्न थाल्यो कि जस्ता चिन्ताले सताइरहन्छ। जतिसुकै श्रृङ्गारपटार गरेपनि, जति बलिया मांसपेशी बनाएपनि र जतिसुकै स्वस्थ खानेकुरा खाएपनि शरीरको समस्या के हो भने हामी बिरामी पर्छौं, बुढो हुन्छौं, वा कुनै दुर्घटना भएर हामीलाई चोट लाग्न सक्छ।
तेस्रो, यो शरीरलाई धोएन भने गन्हाउन थाल्नेछ, दाँत माझेन भने श्वास दुर्गन्धित हुनेछ, हामीले निष्कासन गर्ने पिसाब र दिसा गन्हाउँछ। कुनै खानेकुरा केहीबेर चबाएर मुखबाट निकाल्यौं र कसैलाई खान दियौं भने कसले त्यसलाई सफा र खानयोग्य ठान्ला? यहाँनेर समस्या के हो भने हामी अरूसँग असम्बन्धित आफैँ उब्जेका सत्ता होइनौं र यो शरीरबाट अलग भएर “अहो, यो सुन्दर शरीर” भन्न मिल्ने कपोलकल्पित घरमा बसेका होइनौं। हामी यो शरीरमै रहन बाध्य छौं; यसका अनेक सीमितताका बावजुद पनि हामीले यसको उचित स्याहार सुसार र सही उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि आफ्नो दुःखबाट मुक्त हुन र अरूलाई पनि सहयोग गर्न सकौं।
चौथो, यही शरीरको माध्यम नभइ वास्तविक जीवनमा अरूले हामीलाई देख्न सक्दैनन्। भिडियो गेम खेल्दा कुनै अनलाइन अवतार बनाएर प्रस्तुत हुन सकौंला, तर कसैले वास्तविक जीवनमा हामीलाई भेट्नुपर्यो भने यो शरीर जस्तो छ त्यस्तै रूपमा मात्र भेट्न सक्नेछन्। उमेर ६० वर्ष भएपनि हामी आफूलाई २० वर्ष हुँदा जस्तो थिएँ त्यस्तै देखिन्छु भनेर कल्पना त गरौंला, तर अरूले देख्दा ६० वर्षे बुढो शरीरकै रूपमा हामीलाई देख्नेछन्। यो कुरालाई बुझ्न र स्वीकार गर्न सकेनौं भने हामी आफूलाई बेवकूफ तुल्याउने र उमेर नसुहाउँदो काम गरेर आफ्ना लागि समस्या खडा गर्न सक्नेछौं।
हाम्रो यो सीमित क्षमतायुक्त शरीर यथार्थ दुःखको उदाहरण हो किनकि यो अनित्य छ, समस्याजनक छ, तैपनि यसबाट हामी अलग रहन सक्दैनौं, र अरूले हामीलाई देख्दा यही शरीरकै रूपमा देख्छन्, चाहे त्यो कुरा हामीलाई मन परोस् या नपरोस्। यस्तो ढंगको शरीर हुनु नै पर्याप्त दुःख हो, तर बुद्धले बताउनुभए अनुसार यथार्थ दुःख के हो भने हामी यस्तै ढंगको शरीरलाई निरन्तरता दिइरहन्छौं, जन्मौं जन्मसम्म यस्तै शरीरलाई धारण गरिरहन्छौं र यसैलाई आधार बनाउँदै अन्तहीन रूपमा दोहोरिरहने बेखुसी र सन्तुष्टि नदिने भोग तथा सुखको चक्कर काटिरहन्छौं। के तपाईं सबैले चाहेको कुरा त्यही हो?